အမိမြေလွမ်းသူ: Gtalk သုံးပြီင်္း လူများများပွားရအောင်
Gtalk သုံးပြီင်္း လူများများပွားရအောင်
လုပ်နည်းတွေက အများကြီးပဲ ..အလွယ်ဆုံးနည်းကို ပြောပြမယ် ….
service@gtalk2voip.com ကို ကိုယ့် Gtalkထဲကို Add လိုက်ပါ ….
ကိုယ်နဲ့ ပြောချင်တဲ့ သူတွေလဲ
service@gtalk2voip.com ကို အကုန်လိုက် Add ပါ … ပြီးရင် …Master
လုပ်မည့် သူရဲ့ အလုပ်ကို အရင်ပြောမယ် … Master လုပ်မည့်သူက …
service@gtalk2voip.com ကို ချက်ဘောက်ထုတ်ပြီး .. conf လို ရိုက်
..ပြီးရင် Enter ခေါက် .. ။ ဒီလိုလေး
ပြီးရင် Service ကနေ Master လုပ်တဲ့ သူဆီကို Misscall ၀င်လာမယ် …
Answer လိုက်ပါ … ။
ပြီးရင်. ..Service ကနေ cookies code ပေးလာလိမ့်မယ် …..
အဲဒီ Code ကို ကိုယ်နဲ့ တူတူပြောချင်တဲ့ သူတွေကို ပေးရလိမ့်မယ် …..
ပေးတဲ့ နေရာမှာ ထပ်ဖြည့်ပေးစရာရှိတယ် ..ဘာလဲဆိုတော့ … code ရဲ့
ရှေ့မှာ …. join/ ဆိုတာလေး ထည့်ပေးရမယ် …. ။ အပေါ်က ပုံထဲက code ကို
ဥပမာပြမယ် …ဒီလိုလေး … join/ FPDMJCD0IC19YAD2 အထူးသတိပြုရမှာက join/
ပြီးရင် Spacebar တစ်ချက်ကို ခြားပေးရမယ် … မခြားလို့ မရဘူးနော် ….
ခြားပြီးမှာ code ကို ဆက်ရေး ….. အဲဒါကို တစ်ဖက် ကိုယ်နဲ့
ပြောမည့်သူကိုပေးလိုက် …. တစ်ဖက်လူက ဘာလုပ်ရမလဲဆို ….(
အရမ်းပင်ပန်းတယ် … လျှာထုတ်ပြလိုက်မယ် လျှာထုတ်ပြလိုက်မယ်
လျှာထုတ်ပြလိုက်မယ်) Master လုပ်တဲ့ သူက ပေးတဲ့ code လေးကို
service@gtalk2voip.com ချက်ဘောက်မှာ ထည့်ပြီး ( copy , paste )
ပေးပြီး Enter ခေါက်လိုက် ….
အားလုံးအိုကေ သွားပြီ ……ကြိုက်သလောက် လူစုပြီး ပွားလို့ ရသည်…။
Posted by masterpieces at 7:58 PM